Nin Somali ah oo qirtay dilkii loogu gaystay Diridhaba qoyska reer Djibouti oo la xidhay – Xeernews24
Nin Somali ah oo qirtay dilkii loogu gaystay Diridhaba qoyska reer Djibouti oo la xidhay
14. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciidanka nabadsugida magaaladda Diridhaba ayaa waxa uu xidhay mid kamid ah kooxdii dabka qabadsiisay aqalka uu deggenaa qoyskii reer Djibouti ahaa ee lagu dilay weerarkii Oromada ee isku gu jiray hooyada iyo 6 caruur ah sida aan kusoo xiganay mid kamid ah dadka la socda xaaladda jirta ee deggen magaaladda oo nala soo xidhiidhay.
Wararka ku saabsan ninkan gacanta lagu dhigay ayaa lagu sheegay uu yahay Soomaali gaar ahaan kasoo jeeda beesha Gurure oo kamid ahaa dadkii uusoo abaabulay maamulka Cabdi Ilay iyo madaxa nabadsugida magaaladda Diridhaba si la iska ga horkeeno Soomaalida iyo Oromada.
Waxa qofkan nala soo xidhiidhay uu sheegay in madaxii nabadsugida ee hore ee magaaladda oo isaga kasoo jeeda beesha Gurgure iyo Cabdi Ilay oo isagu usoo magacaabay jagadan ay ku guda jireen shirqool dagaal sokeeyeye ay kaga abuurayaan gobolka Sitti kaasoo muddo badan ay ku guda jireen fulintiisa.
Ciidanka nabadsugida ee federal ayaa xabsiga dhigay madixii hore nabadsugida Diridhaba barqonimadii hore ee isla maalintii Oromadu ay soo qaaday weerarka kaasoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay fulinta shirqoolka isaga iyo Cadi Ilay oo adeegsanaya kooxo isku gu jira Soomaali gaar ahaan gaar ahaan koox katirsan beesha Gurgure iyo Oromo si dagaal sokeeye looga rido magaaladda Diridhaba sida ishani ay noo xaqiijisay.
Madixii hore ee nababsugida magaaladda Diridhaba Maxamad Axmad ayaa waxa xukuumadda federalku ay hakad galisay shaqadiisa kadib markii la ogaaday inuu ka dambeeyay hurinta iska hor’imaad dhexmaray beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan Gurgure iyo Ciise ee wada deggen magaaladda Malkaa Jabti markii kacodoonku ka bilowday gobolka Sitti kaasoo sababay dhimashada 1 qof iyo in lagu gubo 5 aqalo ah oo kuyaala magaaladdan.
Ninkan Soomaaliga ah ee kasoo jeeda Gurgure ayaa waxa uu qirtay in iyaku ay ka dambeeyeen dabka laga qabadsiiyay aqalka qoyskani deggenaa oo la kulmay dhimasho argagax leh kadib markii nolosha ay ku basbeeleen sida uu noo xaqiiyay googjoogahan la socda dhacdada ninkan lagu xidhay.
Waxa kale oo warkan uu intaa ku daray in ninkani uu sheegay baadhitaan kadib in kooxda uu qaybta ka ahaa ee fulisay falkan bahalnimo ay ka koobnaayeen 8 qof oo isku jirtay Oromo iyo Soomaali gaar ahaan Gurure ,inkaste oo 7 kale aanan wali gacanta lagu haynin sida ishan ay sheegtay.
Dhanka kale waxa ciidanka nabadsugidu magaaladda Diridhaba uu xidhay Imaamka Masjid kuyaala xaafada loo yaqaano Gande Garaade oo ah Soomaali kasoo jeeda beesha Gurgure oo lala xidhiidhay isla dagaaladdan sida uu noo xaqiiyay goobjoogahan.
Imaamka Masjidkan ee uu xidhay ciidanka nabadsugida ee magaaladda ayaa sababta qabashadiisa ka dambaysa lagu sheegay inuu ku sugnaa goobta kooxdan fulisay falka dilka ah ee loo gaystay qoyskan reer Djibouti ah,taasoo dhalisay tuhun aad u weyn oo ah inuu qayb ka ahaa kooxda Soomaalida ah ee fulinaysay qorshaha maamulkii Cabdi Ilay iyo madixii hore ee nabadsugida Diridhaba.
Waxa sido kale isha warkan ay xaqiijisay in ciidanka nabadsugidu uu wado baadhitaan lagu hayo imaamka Masjidkan oo ku saabsan waxyaabaha ku saabsan sababaha ka dambeeyay ku sugnaashishiisa xilligii kooxdan ay ka gaysanaysay dilkan bahalnimo ee sahayday nolosha qoyskii reer Djibouti ahaa ee lagu dhex gubay aqalkii ay deggenaayeen.
Dhinaca kale dadkii maatida ahaa ee kasoo barokacay magaaladda Diridhabe ee u isku gu jiray haweenka iyo caruurta ayaa waxay intooda badan oo u badnaa qoysas aqoon ugu labaatay magaaladda Diridhaba sida goobjoogahan uu sheegay.
Waxa sido kale wararka deegaanka ka imanaya ay sheegayaan in golihii dhexe ee Cabdi Ilay ee maamulka looga yeedhay magaaladda Addis Ababa,iyada oo wararka qaar sheegeen in maanta Addis ku sugan yihiin,inkaste oo shalay xubin kamid ah golahan uu sheegay shalay in aynan tagi doonin.
Waxa dhinaca kale degeen xaaladda deegaanka si guud kadib dhowr maalmood oo qaybo badan oo kamid ah uu ku jiray jahowareer iyo is-dhexyaac uu sababay maamulkii Cabdi Ilay oo isagu masuulka ah dhibaatada ka dhacay deegaanka ee isku gu jirta dilka iyo boobka iyo barokaca loo gaystay bulshada deegaanka.
Waxa dhanka kale wararka ka imanaya gobolka Sitti gaar ahaan Diridhaba ayaa sheegayaan in wali hakad ku jiro tareenka cusub ee isku xidha Djibouti iyo Ethiopia sababo la xidhiidha kadib markii maleeshiyada Liyu ga ee maamulkii Cabdi Ilay ay gooyeen xadhkaha Kooraanka ee uu ku shaqeeyo tareenkan magaaladda Ayshaca ka hor intii aynan ka firxan deegaanadan.
Waxa isku socod la’aanta tareenka ee uu keenay falka maleeshiyada Cabdi Ilay sido kale ay sababtay in tareen ay saaran tahay alaabo tiro badan uu ku xaniban yahay magaaladda Cali Sabiix ee Koonfurta dalka Djibouti ee u dhow soohdinta dalka Ethiopia halkaas oo ay ku taala mid kamid ah xarumaha ugu waa wayn ee loo dhisay tareenkan cusub gaar ahaan qaybta Djibouti.
Wararka ka imanaya gobolka Sitti ayaa waxa sido kale sheegayaan in firxad ay ku jiraan xubno kasoo jeeda gobolkan oo uu kamid yahay madaxwayne ku xigeenkii Cabdi Ilay oo iyaku qayb ka ahaa dambiyada ka socda deegaanka gaar ahaan gobolka Sitti oo bulashada ka dhex waday kala qaybin iyo iska horkeen si ay u fuliyaan qorshe lagaga abuuray dagaalka sokeeye gobolkan oo uu ka dambeeyay hogaamiyihii Tigreega tirada yar u wakiishay deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ku caan baxay xumaanta Cabdi Ilay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/air.jpg 540 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-14 23:15:512018-08-14 23:15:51Nin Somali ah oo qirtay dilkii loogu gaystay Diridhaba qoyska reer Djibouti oo la xidhay
Wax Ba Baro 7 Faa’iido Oo ILAAHAY SWT Ku Mannaystay Malabka Iyo Muhiimaddiisa... ETHIOPIAN Airlines oo 41 sano kaddib billaabeysa duullimaadkii Soomaaliya.